Ahoana no Hahafantaranao An’Andriamanitra?
Hahafantatra an’i Jehovah ianao, raha mamaky Baiboly. Nifidy olona vitsivitsy Andriamanitra, taloha ela be, mba hanoratra ny teniny. Natambatra ireny teny nosoratana ireny ary nantsoina hoe Baiboly. Mianatra momba an’Andriamanitra isika ankehitriny, rehefa mamaky azy io. Antsoina hoe Tenin’Andriamanitra ny Baiboly, satria tenin’i Jehovah no ao anatiny. Afaka mino izay lazainy isika, satria ‘tsy mahay mandainga Andriamanitra.’ (Hebreo 6:18) Tena marina izay voalazan’ny Tenin’Andriamanitra.—Jaona 17:17.
Anisan’ny fanomezana tsara indrindra avy amin’Andriamanitra ny Baiboly. Toy ny taratasy avy amin’ny ray be fitiavana ho an’ny zanany izy io. Voalaza ao fa nampanantena Andriamanitra hoe hovany ho paradisa na toerana mahafinaritra ny tany. Voasoratra ao koa izay nataony taloha, sy izay ataony ankehitriny, ary izay hataony amin’ny hoavy ho an’ireo zanany tsy mivadika. Manampy antsika ho sambatra ny Baiboly, ary manome vahaolana amin’ireo zava-manahirana antsika.—2 Timoty 3:16, 17.
Naman’Andriamanitra ny Vavolombelon’i Jehovah. Afaka manazava aminao izay ampianarin’ny Baiboly izy ireo. Miresaha fotsiny amin’izy ireo raha maniry hianatra Baiboly ianao. Hampianatra anao maimaim-poana izy ireo. (Matio 10:8) Afaka manatrika fivoriana kristianina koa ianao. Toeram-pivavahana antsoina hoe Efitrano Fanjakana no anaovana izany. Vetivety ianao dia hahafantatra zavatra maro momba an’Andriamanitra, raha mandeha mivory.
Hahafantatra an’Andriamanitra isika, raha mandinika ny zavatra noforoniny. Milaza, ohatra, ny Baiboly hoe: “Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany.” (Genesisy 1:1) Nanao ny masoandro koa i Jehovah, rehefa nahary “ny lanitra.” Inona no ianarantsika avy amin’izany? Midika izany fa Andriamanitra tena mahery i Jehovah. Izy ihany no afaka mamorona zavatra ngezabe toy ny masoandro. Midika koa izany fa manam-pahendrena i Jehovah. Nataony manafana sy manazava mantsy ny masoandro, nefa tsy mety lany mihitsy ny heriny. Mila fahendrena izany.
Hita amin’ny zavaboary fa tia antsika i Jehovah. Diniho, ohatra, ireo karazam-boankazo maro be eto an-tany. Azon’i Jehovah natao ny tsy namorona afa-tsy karazam-boankazo iray, na tsy namorona mihitsy. Nanome antsika voankazo be dia be anefa izy, ary isan-karazany ny endriny, ny habeny, ny lokony, ary ny tsirony. Midika izany fa Andriamanitra be fitiavana i Jehovah, sady tena malala-tanana sy tsara fanahy ary mihevitra ny hafa.—Salamo 104:24.
Tena azo antsoina hoe Tenin’Andriamanitra ve ny Baiboly nefa olona no nanoratra azy? Hevitr’iza no hita ao amin’izy io?
‘Namorona ny Zava-drehetra i Jehovah’